नाउँ हराएको समाज – Sajha Bisaunee
नाउँ हराएको समाज
यो यही समाज हो, जहाँ म बस्छु, तिमी बस्छौ, उहाँ बस्नुहुन्छ, उनी बस्छिन्, ऊ बस्छ, हामी बस्छौं ।अझै थपिदिउन सर्वनाममा ‘हरू’ ः हामीहरू, तिमीहरू, तिनीहरू, उहाँहरू । जो जहाँ जसरी बसे पनि समाज बन्नु न छ ।
म अब एक अर्थले समाजलाई प्रष्ट्याउँछु । तिमी एक अर्थले, तपाई एक अर्थले, ऊ एक अर्थले, उनी एक अर्थले… जे भए पनि शब्दमा बन्नु समाज न छ । समाज बन्न खासमा के–के योग्यता पुग्नुपर्छ ?
समाजमा बस्न क्षमता कस्तो हुनुपर्छ ?
समाजमा आफ्नो लेवल कसरी बनाउनुपर्छ?
समाज अर्कै के हुनसक्छ ?
बस यी प्रश्नको परीक्षा लिइयोस् न अनि छानियोस् समाजमा बस्न लायक मानिसहरू अनि अथ्र्याइयोस् न समाजको अर्थ यो हो भनि ।
दुई÷चार वटा घरहरू एक ठाउँमा बनाइए, अर्को थपियो, अर्को थपियो, अर्को थपियो…। चुपचाप घरहरू, मान्छेहरू थपिरहे तर कसले सोधेन कसैलाइ, ‘समाज म वस्नु ठिक हँु कि नाइ ?’
छिमेकी–छिमेकी बीचमा चिनजान बढ्छ, एक–आपसमा कुरा गर्छन्, समय विस्तारै बित्दै जान्छ । ती कुराहरू अब बढ्दै जान्छन्, छिमेकी बढ्दै जान्छन् ।
अनि सुरु हुन्छन् कुरा काट्ने सन्दर्भहरू ।
किन ? एउटै कारण छ नि । छिमेकी बन्नुभन्दा पहिले माथि उल्लेखित प्रश्नहरू, जवाफ, नतिजा निकाल्ने कुनै नियम नै बनाइएन । परीक्षा नै लिइएन । समाज हुनका निम्ती सायद सबै तह, स्तरका मान्छे हुन जरुरी छ ।
कोही चोरहरू हुन्छन्
कोही थाहै नभएको
कोही महिला, कोही पुरुष…।
मान्छेहरूको विविधता नै समाजको परिचय हो, मान्छे विना न समाज रहन्छ, न त समाजविना मान्छे ।
मानौं १०÷१५ वटा घरमात्रै एक ठाउँमा बनाएर मान्छे कोही नबसे भने पक्कै त्यो समाज त होइन होला ?
या त घर नै नबनाएर एक हुल जमात उभिइरहे भने त्यो पनि त समाज होइन होला ? हिजो मात्र छिेमकी कि छोरा बलात्कृत भइ, दोषी पनि अलि परको छिमेकीको छोरा रहेछ ।
अस्ती बोक्सी भन्दै खुब रमझमसँग एक युवतीको घरमा पर्व मनाए तिनै छिमेकीहरूले । विदेशबाट घर फर्किएका श्रीमान् बाटोमै लुटिएर लासको कोक्रो बनी आँगनमा लम्पसार सुतिरहेछन्, श्रीमतीको छेऊमा । त्यही पर छिमेकीको घरमा । रातारात ग्याङ फाइट गरी एउटी आमाको छोरो रक्ताम्मे भइ घर पुगेको छ ।
एउटा छोरा ड्रग्स, ड्रग्स भन्दै बन्द ढोकाबाट चिच्याइरहेको छ ।
एउटी छिमेकीकी छोरी गाइगोठमा रक्ताम्मे शरीर ओछ्याएर केक्कुवहरूकी प्यास बनिरहेकी छे ।
कहिले धर्मका नाममा त कहिले जातका नाममा एकोहोरो लडिरहेछन् मानवहरू ।
खै त्यो युवती, त्यो हिंसाले चेपिएकी नारी त्यो लास बनेको श्रीमान्को शरीर, कुलतले मरिरहेको छोरो…यी सबै बस्ने भनेकै समाजमा त होला ।
अब म परेँ दोधारमा । समाजलाई प्रष्ट्याउ कसरी, विरोध ग¥यौं कसरी, व्याख्या गरिदिउ कसरी ?
सानो–सानोमा सात÷आठ कक्षामा हो सायद, समाज भनेको के हो ? एक वाक्यमा पष्ट्याउनुहोस् भन्दै प्रश्न आउँथ्यो ।
खै त्यतिबेला मैले के अर्थ लेखेहँला ? यदि त्यही प्रश्न आज कोही आएर सोध्यो भने, मेरो जवाफ त कपिभरी लेख्दा पनि सकिदैन । चित्त नै बुझ्दैन ।
आफै–आफै हाँस्न मन लाग्छ, खै यो समयको परिवर्तन हो या शब्दको अर्थको ।
कहिलेकाहीं सोच्छु म एउटा यस्तो समाज नीति बनाउँ र बस्ती बसालु…फेरि थाँती राख्छु…‘पागल बस्ती’ उपन्यासको प्रभावमै माथि परेको पो हो कि ।
म पनि अच्चम कै छु, प्रेमको अर्थ किन मान्छेले बदलिरहन्छन्, समाजको अर्थ किन फरक–फरक हुन्छन्, मान्छेहरू समाजलाई बदल्छन् यो समाजले मान्छेलाई ।
उफ ! प्रश्न नै प्रश्न जवाफ दिने खै कुन ?
भैरव अर्यालको ‘आलु’ निबन्ध सम्झिन्छु र एक दिन हाँस्छु ! साँच्चै त्यतिबेला पनि बजार यो आलु यति नै भाऊमा किनबेच हुँदो हो कि नाइ ? अचेल त हर मान्छेका घरमा पाँच किलो, १० किलो, एक किलो, दुई किलो जति भए पनि हुन्छ नै ।
तिनीहरूले ‘आलु’ निबन्ध पढे होलाान् कि नाई !
भैरव अर्यालले कति गम्भिर भएर यो आलूको नाममा निबन्ध रचे होलान् ।
एउटा घरको वरिपरिका घरहरूलाई छिमेकीका घर भनिन्छ, खासमा छिमेकी भनेकै के होला ? अर्थ ? आवश्यकता ? फेरि अघिकै प्रश्न उठ्छन् ।
यति अस्पष्ट म मान्छे पनि त यही समाज भन्ने ठाउँमा बस्छु । त्यति मात्रै कहाँ हुनु किरायको घरमा बस्छु । अब मलाई यस्तै किरायमा बस्ने मान्छेले छिमेकी भन्छन् या आफ्नै घर भएका मान्छेहरूले भन्छन्, यसैमा अन्यौलता छ । म छिमेकी बनेँ या बनिएँ ?
मान्छेलाई हसाउन पनि सजिलो छ, तारिफ गर्दिए पुग्छ । रुवाउन पनि सजिलो छ, किमी कमजोरीमा घोचिदिए पुग्छ ।
हे समाज, मलाई तिम्रो स्वरूप देख्न मन छ । मलाई तिम्रो अर्थ जान्न मन छ । मान्छेहरूलाई भन्न मन छ । सबैलाई समाज बनाउन जाउँ भन्ने मन छ ।
खै यो होला त अब ! म कोसँग मागु समाजको अर्थ ?
त्यो बलात्कृत युवतिसँग
त्यो बेसाहारा रक्ताम्मे युवतीसँग
त्यो शरीरभरी निलडाम देखाएकी नारीसँग
त्यो लास परेको मान्छेसँग
त्यो विकृतिमा फसेको मान्छेसँग
त्यो बुढो आँखामा आँसु छल्काइरहेको
कि बेसाहारा आमासँग ?
खोइ को–कोसँग सोधु म समाजको अर्थ ।
भैगो अब म केही भन्दिनँ,
समाज पनि अस्तित्वविहीन बनेको छ ।
समाजले आफ्नै नाम हराएको छ ।
समाज पथ्थर भएको छ ।
समाज हराएको छ ।
समाज पनि जिउँदो लास भएको छ ।
आगोमा जलिरहेको छ ।
जमिनमा ढलिरहेको छ ।
रक्ताम्मे छ ।
यदि समाज व्यक्ति हुँदो हो भने आत्तिएर, चिच्चाएर, कराएर, रोएर, दौडेर आउँदो हो र सोध्दो हो
‘मेरो अर्थ के ?’
‘म को हुँ ?’
प्रकाशित मितिः ८ बैशाख २०७५, शनिबार १६:४४